ကုိရမ္​ၾကမ္​း — Steemkr
ကမျြးစာကိုဘေဂျင်းက၎င်း၏နိုင်ငံသားများဘာသာတရားကိုဘယ်လိုချ clamps အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံ, အွန်လိုင်းဈေးကနေဖယ်ရှားခဲ့ကြပုံပေါ်သည်။ တရုတ်ကအမြဲသာ State-ပိတ်ဆို့အရေးယူအသင်းတော်များအားဖြင့်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခံရဖို့ခွင့်ပြု, သမ္မာကျမ်းစာ၏ရောင်းအားထိန်းချုပ်ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကအွန်လိုင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါမရရှိနိုင်ခဲ့။ ဒါကကွက်ယခုခိုင်မြဲစွာပိတ်ထားခံရဖို့ပုံရသည်။ "သနျ့ရှငျးသောကျမ်းစာက" အဘို့ရှာဖွေမှု JD.com အပေါ်ရလဒ်များကိုမပြန်ခဲ့သလဲ, Amazon.cn အပေါ်ရလဒ်များအဓိကစာသားကိုမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လေ့လာမှုလမ်းညွှန်နှင့်ကိုရမ်ကျမ်းပါဝင်သည်ကိုပြု၏။
ထိုကဲ့သို့သောကလေးငယ်များရဲ့ကမျြးစာကဇာတ်လမ်းများ၏သရုပ်ဖော်ပုံအစုံအဖြစ်အချို့သောဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များနေတုန်းပဲမရရှိနိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း Taobao တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးအွန်လိုင်းဈေးတွင်တစ်ဦးရှာဖွေမှု, သည် "ကလေးအစားအစာကျမ်းစာ" နှငျ့ "autoimmune ကမျြးစာကိုငြိမ်းစေလျက်ရောဂါ," မဟုတ်ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာ၌ပါရလာဒ်ပြန်ရောက် ။ JD.com, Amazon.cn နှင့် Taobao ချက်ချင်းမှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ ကြာသပတေးနေ့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အများပြည်သူအားလပ်ရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးကအွန်လိုင်းကုန်သည်များက CNN ဖောက်သည်နေဆဲပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျမှတဆင့်သူတို့ထံမှသန့်ရှင်းသောစာအုပ်၏မိတ္တူရရှိရန်စခွေငျးငှါကိုပြောသည်, ဒါပေမယ့်သမ္မာကျမ်းစာကိုအများပြည်သူစာရင်း Taobao အပေါ်ယခုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ တရုတ်တစ်ဦးကက်သလစ်အဖြစ်ဘဝ ဗီဒီယို Play တရုတ် 03:05 အတွက်ကက်သလစ်အဖြစ်ဘဝ သမိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုမုန်းတီးမှု စာရာကွတ်, Freedom House မှာအရှေ့အာရှအကြီးတန်းသုတေသနလေ့လာဆန်းစစ်အရောင်းပိတ်ပင်မှု "အင်တာနက်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်ကန့်သတ်နှင့်အတူဖြတ်မည်သို့မည်ပုံ၏အရေးပါသောဥပမာပါပဲ။ " ဟုပြောသည် "ထိခိုက်မခံတဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းအရာများနှင့်အုပ်စုများကိုအများဆုံးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆင်ဆာအကြားနေကြတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနမှာတော့ကျနော်တို့ကတရုတ်အာဏာပိုင်များကို ပို. ပို. ဘာသာတရားကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ယုံကြည်သူများအပြစ်ပေးဖို့ကပိုမြင့်မားတဲ့နည်းပညာနည်းစနစ်များ အသုံးပြု. တွေ့ရှိခဲ့ - ။ ယုံကြည်သူများ၏စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဖမ်းဆီးခြင်းအပါအဝင်အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်များမျှဝေခြင်းအတွက်" တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာ, အစ္စလာမ်ဘာသာ, ကက်သလစ်, ပရိုနှင့် Taoism - - ထိုသို့သောတရုတ်မျိုးချစ်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းသို့မဟုတ်တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစည်းအရုံးအဖြစ်တရားဝင်ရုံးသုံးအဖွဲ့အစည်းများကကြီးကြပ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်တင်းကျပ်စွာငါးအသိအမှတ်ပြုဘာသာတရားနှင့်အတူအစိုးရအနေဖြင့်ထိန်းချုပ်နေပါတယ်။ သာသနာရေးများအတွက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sara) ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတရုတ်နိုင်ငံတွင်ခရစ်ယာန်ဘာသာအပေါ်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကငါးနှစ်အစီအစဉ်အရ, "လွတ်လပ်ရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏နိယာမ" ကိုထိန်းသိမ်းထားမှု "ဟုတရုတ်လူမျိုး၏အရှက်သမိုင်း" ရန်အရေးကြီးပါသည်နှင့် ၏တန်ခိုးအားဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အသုံးပြုမှုကို "ကိုလိုနီစနစ်နှင့်နယ်ချဲ့ဝါဒ။ " တရုတ်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်ဆက်ဆံရေး 1951 ခုနှစ်တွင်ဖြိုဖျက်ပြီးကတည်းကဘေဂျင်းနှင့်ဗာတီကန်အကြားအဓိကအဓိကအတားအဆီးဖြစ်သည့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကခန့်အပ်ထားသောကြသည်မဟုတ်။ တိုးတက်မှုကိုအချို့သောတရုတ်အရာရှိများသည်သန့်ရှင်းသောကြည့်ရှုနှင့်အတူတစ်ဦးသဘောတူညီချက်အီစတာကျော်ရာအရပ်ကိုယူနိုင်ကြောင်း, သို့သော်ဤအထဲကဝေ့မပြုခဲ့ဟုအတူမကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်ကြပြီမှပေါ်လာခဲ့ချေ။
ကမျြးစာအုပျမြားများရောင်းချမှု၏တားမြစ်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်များအတွက်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြည်နယ်သရုပ်ပြသိသာထင်ရှားစွာပင်စိုးရိမ်စရာပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက - ဝီလျံ Nee, နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့မှာတရုတ်သုတေသီဗာတီကန် "ဖြစ်ကောင်းသူတို့ရဲ့တရုတ် counterparts တွေကိုနှင့်အတူ၎င်း၏ဆွေးနွေးမှုများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဤပြဿနာကိုယူသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံတွင်။ " ဘာသာရေးကြီးကြပ် လေ့လာသုံးသပ်သူများကတရုတ်သည်လက်ရှိတွင်အဓိကကအုပ်ချုပ်ပုံပြောင်းကုန်ပြီနှင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများဘာသာတရားကိုလျှက်ကပြောသည်။ ညီညွတ်သောတပ်ဦးလုပ်ငန်းခွင်ဌာန, ပင်လယ်ရပ်ခြားတရုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားထုတ်မှုကြီးကြပ်သောအာဏာရကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ယခင်နေရာ၌ဦးစီးဌာန, မကြာသေးမီကထပ်မံလူ့အဖွဲ့အစည်းကျော်ပါတီရဲ့အကြွင်းမဲ့အာဏာထိန်းချုပ်အားပေးတိုင်းရင်းသားနှင့်ဘာသာရေးရေးရာတာဝန်လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ ယခုအပတ်ထုတ်ဝေဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုအစိုးရအဖြူရောင်စက္ကူ, အဆိုအရဘာသာတရား "ဟုအဆိုပါဆိုရှယ်လစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ " ရမယ် "ဘာသာရေးယုံကြည်သူများနှင့် Non-ယုံကြည်သူများအချင်းချင်းလေးစားနှင့်အညီအသက်ရှင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မီဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ကျူးလွန်များနှင့်အမျိုးသားရေးပြန်လည်နုပျိုခြင်းတရုတ်အိပ်မက်များ၏သဘောပေါက်ဖို့အထောက်အကူပြုပါတယ်" ဟုစက္ကူအရာရှိတဦးကကွန်မြူနစ်ပါတီစာရင်းကလည်း, မူဝါဒများ။ "ပိုပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဘာသာတရားကိုထိန်းချုပ်ဖို့သမ္မတ Xi Jinping အောက်မှာကျယ်ပြန့်လမ်းကြောင်းသစ်, အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ (ရှိပါသည်)," လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့ Nee ကဆိုသည်။ "ဒါဟာအစိုးရကသူတို့ကမျြးစာအုပျမြားများရောင်းချမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်နေတစ်ချိန်တည်းမှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်မလုပ်ပဲကြောင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပါပဲ။ " အားထုတ်မှုဟာ Sara ငါးနှစ်တွင်အစီအစဉ်အရသိရသည်တစ်ဦးထက်ပို "Sinicized" စာသားကိုနှင့်တကွ, တရုတ်ကမျြးစာ၏ဗားရှင်းသစ်ထုတ်လုပ်ရန်ဆဲဖြစ်ကြသည်။ "သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အရာရှိတဦးကပြန်လည်ထုတ်ဝေဖို့စီစဉ်ထားအားထုတ်မှုများ၏ဖယ်ရှားခံ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတက်ကြွစွာကျနော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာ, တိဘကျဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက်ဖူးကြောင်းဘာသာရေးကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. အနက်ကိုဘော်ပြဖို့ဘုရားမဲ့ဝါဒီ (ကွန်မြူနစ်ပါတီ) ကကျယ်ပြန့်အားထုတ်မှုနှင့်အတူ fit နှင့်မှမယ်လို့ ယနေ့အထိအငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာ, ခရစ်ယာန်ဘာသာ, "ကွတ်ကပြောပါတယ်။
သူမသည်ပြောင်းရွှေ့နေသောခေတ်ရေစီးကြောင်းတရုတ်ခရစ်ယာန်များကို alienating သို့သော်အာဏာပိုင်များအပေါ်ရလဒ်များကိုနိုင်ကပြောပါတယ် " ... မဟုတ်ရင် apolitical နှင့်ဖြစ်ကောင်းမဟာ Firewall ကိုခုန်သို့မဟုတ်ကမျြးစာကိုမိတ္တူရယူဘို့ extralegal နည်းလမ်းထွက်ရှာသူတို့ကိုအားပေးအားမြှောက်။ "
k myaya hcar ko bhaygyinnk ၎inneat ninengansarrmyarr bharsartararrko bhaallohkya clamps aahpyit taroteninengan, awanline jhayy k nay hpaalsharr hkae kya pone paw sai . tarote k aamyaellsar State- pateshoetaarayyyuu aasainntawmyarr aarr hpyint hpya ant way hkyinn nhaint ponenhaiut hkanr hphoet hkwin pyu, sammar kyamhcareat raunggaarr hteinhkyaotehtarr partaal, darpaymaae makyaarsayyme nhait myarraatwin k awanline ko waal hkyinn nghaar m r shinine hkae . dark kwat yahku hkinemyaellhcwar patehtarr hkanr hphoet pone rasai . " sanya shngya saw kyamhcar k"abhhoetsharhpwaymhu JD.com aapaw raladmyarrko m pyan hkae salell, Amazon.cn aapaw raladmyarr aadhik hcarsarrko m parwainhkae parbhuu, darpaymaae laelarmhu lamnywhaan nhaint koramkyam parwainsai ko pyu eat . htokaeshoetsaw kalayyngaalmyarrrae k myaya hcar k jaratlam myarreat sarotehpawpone aahcone aahpyit aahkyahoetsaw saathcaut htotekone myarr naytone pell m r shinine hkaekyasawlaee Taobao taroteninenganeat aakyeemarrsone awanline jhayy twin tait u sharhpwaymhu, sai " kalayy aahcarraahcar kyamhcar" nhangya "autoimmune k myaya hcar ko ngyaaim hcay lyet rawgar," mahote hkaraityaran kyamhcar par ralardpyanrout . JD.com, Amazon.cn nhaint Taobao hkyethkyinn mhaathkyetpayyraan taunggsomhumyarr ko tonepyan hkaeparbhuu . kyaarsapatayynae taroteninenganaatwat aamyarrpyisuu aarrlautraat hpyithkaesai . nhait u k awanline konesaimyarrk CNN hpoutsai naysell puggalik maatsae hk ya mhat saint suuthoet htanmha san shinn saw hcaraote eat mittuu rashiraan hc hkway ngya nghaar ko pyawwsai, darpaymaae sammarkyamhcar ko aamyarrpyisuuhcarrainn Taobao aapaw yahku mahpyitninebhuu . tarote tait u kaatsalait aahpyitbhaw bedeyo Play tarote 03:05 aatwat kaatsalait aahpyitbhaw saminesinerar raan lomoneteemhu hcar rar kwat, Freedom House mhar aashaeaarsh aakyeetaann sutaysan laelarsaannhcait aaraunggpatepainmhu " aaintarnaat sainsar hpyattoutmhu bharsarrayy lwatlaut hkwin aapawk ant saat nhaint aatuu hpyat maishoetmaipone eat aarayyparsaw upamar parpell . " hupyawwsai " htihkite m hkan tae bharsarrayy aakyaunggaararmyarr nhaint aotehcumyarr ko aamyarrsone taroteninengantwin sainsarakyarr naykyataal" hu suu k sosai . " kyawantawthoetrae sutaysan mhartot kyanawthoet k tarote aarnarpinemyarrko po. po. bharsartararrko hteinhkyaoteraan nhaint yonekyisuumyarr aapyitpayy hphoet k po myint marr tae naeepanyar naeehcanaitmyarr aasonepyu. twaeshihkae - . yonekyi suumyarreat hcaung kyi hkyinn nhaint hpamseehkyinn aaparaawain awanline satainnaahkyetaalaatmyarr myahawayhkyinn aatwat" tarote buddhabharsar, aahchcalarm bharsar, kaatsalait, paronhaint Taoism - - htoshoetsaw tarote myoehkyit kaatsalait bhurarrkyaungg shoetmahote tarote buddhabharsar aahcaeeaarone aahpyit tararrwain rone sone aahpwalaahcaeemyarr k kyeekyaut taroteninengantwin bharsarrayyalaeakyang tainnkyauthcwar ngarr aasiaamhaatpyu bharsartararr nhaint aatuu aahcoeranay hpyint hteinhkyaote naypartaal . sarsanarrayy myarraatwat pyinaalaotehkyaoterayy (Sara) k ponenhaiut htoteway taroteninengantwin hkaraityaranbharsar aapaw tait u makyaarsayyhkaink ngarrnhait aahceaahcainar, " lwatlautrayy nhaint kopine hceman hkaant hkwal mhu eat niyarm" ko hteinsaimhtarrmhu " hu taroteluumyoe eata shat samine" raan aarayykyeeparsainhaint eat taanhkoe aarr hpyint hkaraityaranbharsar eat aasonepyumhuko " kolonehcanait nhaint naalhkyaae ward . " tarote kaatsalait hkaraityaran gon aote sarartawsaatsanrayy 1951 hkunhaittwin hpyaohpyet pyee kataeek bhaygyinn nhaint bartekaanakyarr aadhik aadhik aatarraasee hpyit saeet poterahaannmainnkyee k hkaant aaut htarrsaw kyasai mahote . toetaatmhuko aahkyahoetsaw tarote aararshimyarr sai san shinn saw kyi shu nhang aatuu tait u sabhawtuunyehkyet aehcatar kyaw rar aarautko yuu ninekyaungg, shoetsaw iahtellk wae m pyuhkae hu aatuu makyaarsayyme raatsattapaat kya pye mha pawlar hkae hkyaay . k myaya hcaraupyamyarr myarr raungghkyamhu eat tarrmyit bharsarrayy lwatlaut hkwin myarraatwat pomo soe rwarr lar pyinaal sarotepya sisar htainsharrhcwar pain hcoerainhcarar pyaunggshwae hpyitpartaalkataeek - welyaan Nee, ninengantakar lwatngyaaimhkyamsar hkwin aahpwalmhar tarote sutaysebartekaan " hpyitkaungg suuthoetraetarote counterparts twayko nhaint aatuu ၎inneat swaynwaymhumyarr aatwat htaeet swin hcain hcarr shoet i pyaဿnar ko yuu saint taallhoetsopartaal taroteninengantwin . " bharsarrayykyeekyaut laelarsonesaut suumyarr k tarote sai laatshitwin aadhik k aotehkyaotepone pyaunggkonepye nhaint pateshoetaarayyyuumhumyarr bharsartararrko shat kapyawwsai . nyenywatsaw taut u lotengaannhkwin htarn, painlaal raut hkyarr tarote sya jar lwhammoemhu aarrhtotemhu kyeekyaut saw aarnarr kwanmyauunait parteeat yahkain nayrar u hcee htarn, makyaarsayymek htautman lhuaahpwalaahcaee kyaw parterae aakyawinmaeaarnar hteinhkyaote aarrpayy tinerainnsarr nhaint bharsarrayy rayyrar tarwaan lwhaellpyaungg r yuuhkaesai . yahkuaapaat htoteway bharsarrayy lwatlaut hkwin aapaw aasaittaithku ko aahcoer aahpyauuraung hcakkuu, aasoaarabharsartararr " hu aasopar soshallait lhuaahpwalaahcaee mha mimithoet ko ko litelyawwnyehtway hpyitaaung . " ramaal " bharsarrayy yonekyisuumyarrnhaint Non- yonekyisuumyarr aahkyinnhkyinn layyhcarr nhaintanye aasaatshin pyupyinpyaungglellmhu nhaint pw int lainn hkyinn nhaint soshallait hkayatme hphoet suuthoetkosuuthoet kyauulwan myarr nhaint aamyoesarrrayy pyanlai nupyaohkyinn tarote aiutmaat myarreat sabhawpout hphoet aahtoutaakuupyu partaal" hu hcakkuu aararshi t u k kwanmyauunaitparte hcarrainn kalaee, muuwardamyarr . " popyee tainntainnkyautkyaut bharsartararrko hteinhkyaotehphoetsammat Xi Jinping aoutmhar kyaal pya ant lamkyaunggsait, aahtuu s hpyinthkaraityaranbharsar ( shiparsai)," lwatngyaaimhkyamsar hkwinaahpwalrae Nee k sosai . " darhar aahcoerak suuthoet k myaya hcaraupyamyarr myarr raungghkyamhu ko patepain tarrmyit nay taithkyanetaee mhar bharsarrayy lwatlaut hkwin ko myaha int tainraan malotepell kyount hcatepyethpwal parpell . " aarrhtotemhuhar Sara ngarr nhaittwin aahceaahcainar sirasai tait u htaatpo "Sinicized" hcarsarrko nhang takw, tarote k myaya hcar eat barrshinn sait htoteloteraan sell hpyitkyasai . " sammarkyamhcar rae bharhpyitlhoetlellsotot aatwat htitwae saatsanhkyinn nhaint aararshi t u k pyanlai htoteway hphoet hcehcainhtarr aarrhtotemhu myarreat hpaalsharr hkan eat hpyitninehkyay taatkyawhcwar kyanawthoet aahchcalarm bharsar, ti bh kya buddhabharsar myarraatwat hpuu kyaungg bharsarrayy kyamhcarkoaamhae pyu. aanaat ko bhaw pyahphoet bhurarr maewarde ( kwanmyauunaitparte) k kyaal pya ant aarrhtotemhu nhaintaatuu fit nhaint mhamaallhoet yanaeaahtiang yya sonesaw aatineaatar, hkaraityaranbharsar, " kwat k pyawwpartaal . suumasai pyaunggshwae naysaw hkayatrayhceekyaungg tarote hkaraityaranmyarrko alienating shoetsaw aarnarpinemyarr aapaw raladmyarrko nine kapyawwpartaal " ... mahoterain apolitical nhaint hpyitkaunggmahar Firewall ko hkone shoetmahote k myaya hcar ko mittuu rayuubhhoet extralegal naeelam htwat shar suuthoetko aarrpayy aarr myahaout . "
ridoy10046 · 3년 전